Raheem Sterling oo shaki la galinayo ka qeyb galkiisa kulanka Real Madrid ee Champions League – Gool FM
Dajiye February 3, 2020
(Manchester) 03 Feb 2020. Raheem Sterling ayaa lagu soo warramayaa in laga cabsi qabo in uu ciyaaro lugta koowaad ee wareega 16-ka tartanka UEFA Champions League ay la ciyaari doonaan Real Madrid, 26-ka bishan Feebaraayo.
Ciyaaryahanka caalamiga ah ee qaranka England ayaa u muuqday mid ay soo gaartay dhibaato muruga ah intii ay socotay kullantii Tottenham Hotspur ee xalayto.
Arrinkan ayaa la arkay kaddib markii xiddigan uu garoonka isaga baxay, waxa uuna mari doona maalmaha soo socda Scan lagu ogaan doona dhibaatadiisa inta ay gaarsiisan tahay.
Hadaba, Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa waxa uu daabacay in Raheem Sterling laga cabsi qabo in uu seego lugta koowaad ee wareegga 16-ka tartanka Champions Leagea ay ku wajihi doonan garoonka Santiago Bernabéu, kooxda Real Madrid, bishan aynu ku guda jirno 26-keeda.
Manchester City ayaa kullankeeda ugu horeeya waxa ay todobaadka soo aadan waji doonta kooxda West Ham ciyaar qeyb ka ah horyaalka Premier League.
Halka sidoo kale ay waji doonan kooxda Leicester City ka hor inta aysan u safrin magaalada Madrid si ay ula ciyaaraan Real Madrid luga hore wareega 16-ka ee tartanka UEFA Champions League.
Sterling ayaa dhaliyay 20 gool 35 kullan oo uu ciyaaray dhaman tartamada xilli ciyaaredkan waxaana ku jira 5 gool oo uu dhaliyay 6 kulan oo uu kaga soo muuqday Champions League.
Muxuu ka yiri Ansu Fati kaddib markii uu xalay noqday geesigii Barcelona?